kooxaha semi-finalka isugu soo haray - BBC Somali
Image caption taageerayaasha Argantina oo dabaal dagaya kaddib markii ay ka badiyeen kooxda belgium
Labada ciyaar ee semi-finalka ayaa kooxaha ka socda koonfur America waxa ay wada ciyaari doonaan kuwa ka socda Yurub, kaddib markii Argentina iyo Netherlands ay ka guutbeen wareega kooxaha sideeda.
Kooxaha ka socda koonfur Amerika ayaa waxa ay kala yihiin Brazil iyo Argentina, halka qaarada yurubna ay semifinalka u soo gudbeen Netherlands iyo Germalka.
Netherlands iyo Argentina ayaa ku wada ciyaari doonaan garoonka Sao Paulo maalinta arbacada ah, taas oo dib dadka u xusuusineeysa ciyaartii kama danbeysta ee koobka aduunka ee dhacday sanadkii 1978, oo xulka qaranka Argentina uu ku guuleystay.
Kooxda Netherlands ayaa sedex jeer gaartay finalka koobka aduunka, balse ma aysan ku guuleysan in koobka ay qaado.
Balse ciyaarta labadan kooxood dhex mareysa waxa ka horeeya ciyaarta dhexmari doonta kooxda marti galinaysa koobkan aduunka ee Brazil, waxa ayna ku wada ciyaari doonaan garoonka Horizonte xulka qaranka Germalk maalinta talaadada.
Dalka Brazil ayaa ku guuleystay 5-jeer koobka aduunka, halka Germalkana uu qaaday koobka aduunka 3-jeer.